Macluumaadka Dugsiga Dadweynaha Refugee and Families Immigrant | USAHello
In gobolka kasta oo America, carruurta ay xaq u leeyihiin waxbarashada. dugsiyada dadweynaha waa dugsiga oo lacag la'aan ah ay heli karaan dhammaan carruurta muwaadin oo aan muwaadin ahayn. Baro dugsiga dadweynaha iyo noocyada kale ee dugsiga ee USA.
Read ku saabsan nidaamka dugsiga iyo noocyo iyo heerar kala duwan ee dugsiga. Baro sida loo diiwaan carruurtaada dugsiga iyo caawin iyaga si fiican u samayn. La kulan dadka ka shaqeeya dugsiyada dadweynaha. Fahmaan waxa ay sameeyaan iyo sida ay u caawin kartaa ilmahaaga.
Maxay yihiin sharciyada waxbarashada American iyo xuquuqda?
Sharciga Waxbarashada ayaa sheegay in qof walba xaq u leeyahay inuu waxbarasho lacag la'aan ah. Ardayda waxay xaq u leeyihiin in ay xirtaan xijaabka iyo inuu ku tukado,. Waxaad xaq u leedahay inaad turjubaan marka aad la hadal dugsiga carruurta. Baro sharciga waxbarashada ee USA iyo xuquuqda waxbarashada.
In USA, dugsiyada dadweynaha bilaabo da'da u dhaxaysa 4 iyo 6 iyo sii ilaa 16 in 18 sano jir ah. Laakiin aad carruurtaada inay dugsiga ka hor diri karaa da 'hore. Baro oo ku saabsan heerarka kala duwan ee dugsiga. Read ku saabsan meeleynta dugsiga.
Sidee ayaan u diiwaan ilmahayga ee dugsiga?
Si aad ilmahaaga u bilaabaan dugsiga ee USA waa in aad marka hore aad ilmahaaga uga diiwaangeliso sida ardayga. Taas macnaheedu waxa weeye in aad u baahan tahay in ay soo booqdaan dugsiga iyo saxiixa waraaqaha si dugsiga aqbali karaan ilmahaaga. Baro waxa waraaqaha aad u baahan tahay oo ku saabsan sida ilmahaagu la aqbalo. Read ku saabsan cuntada dugsiga iyo shuruudaha dugsiga. Baro waxa la sameeyo haddii ilmahaagu maqan yahay iyo sida loo helo dugsiga.
Dad badan oo ka shaqeeya dugsiga American. Waxaa jira macallimiin, Dabcan, laakiin waxaa sidoo kale jira dad kale oo halkaas si ay uga caawiso ilmahaaga waa. Baro qaar ka mid ah dadka aad la kulmi doonaa dugsiga ilmahaaga.
Waa maxay hawlaha ilmahaygu samayn karaa dugsiga?
Dugsiyada ee USA ka badan bixiyaan casharo ku samayn. Dugsiyada iyo hay'adaha kale bixiyaan fursado kale oo waa weyn, sida safarrada dibadeed, hawlo ka baxsan, dhacdooyinka, barnaamijyada dugsiga ka dib, iyo xerooyinka xagaaga. Ogow sida loogu caawiyo ilmahaaga ka qayb qaataan hawlaha dugsiga.
Sidee baan ilmahayga ee dugsiga ayaa kaa caawin kara?
dugsiga bilaabo waa labada xiiso leh oo ay adag tahay. Waxaad u baahan doontaa in aad ilmahaagu uga caawiso dugsiga. Baro sida si ay u taageeraan carruurta idiin ah nolosha dugsiga iyo caawin gooddigayga. Raadi wax ku saabsan taageerada umeerin ilmahaaga.
Ma leeyahay ilmaheyga dugsiga dadweynaha tago?
Carruurta waa inay dugsiga aadaan oo dalka Mareykanka ah. Haddii aadan caruurtaada u diraan dugsiga, waxaad ka heli kartaa in dhibaato.
Waxaad dooran kartaa nooca dugsiga carruurta si aad u soo diri. Inta badan carruurta dugsiga dadweynaha tag, maxaa yeelay, waa kuu bilaash.
Ma jiraan noocyada kale ee dugsiga?
In USA, waxaa jira siyaabo kale oo ay carruurta ka sokow, dugsiyada dadweynaha ka wacyi-.
Waxaa jira dugsiyo gaar loo leeyahay in ardaydu waa inay bixiyaan inay ka qayb galaan. Dugsiyo badan gaarka ah waxaa maamula kaniisadaha ama hay'adaha diinta. Dugsi kasta oo gaarka loo leeyahay kharashka kala duwan. Qaar ka mid ah ay yihiin kuwo aad u qaali ah. Laakiin qaar ka mid ah waxay leeyihiin deeq waxbarasho si ay u caawiyaan carruurta dugsiyada tagaan haddii ay qoyska uusan haysan lacag ku filan in lagu bixiyo dugsiga gaarka loo leeyahay. dugsiyada gaarka ah inta badan waxay leeyihiin sharciyo kala duwan marka loo eego dugsiyada dadweynaha.
nooc kale oo dugsiga waa dugsiga jaartarka ah. dugsiyada Charter waa lacag la'aan. dugsiyada Charter buuxiyaan shuruudaha tacliimeed iyo sharci la mid ah sida dugsiyada dadweynaha ee dhaqanka, laakiin waxay ka shaqeeya kala duwan marka loo eego dugsiyada dadweynaha, kuwaas oo ku shaqeeya dowladda. dugsiyada Charter ma aha inay raacdo qaar ka mid ah oo dhan xeerarka dugsiyada dadweynaha waa in ay raacaan. Waxuu cunuggaaga u baahan doontaa inaad dalbato in lagu qoro, iyo dugsiyo badan charter hayaan liiska sugitaanka.
waxbarasho Home waa hab kale oo waxbarashada. ardayda guriga wax lagu baro waxaa la baraa by waalidkood. Waxaa jira xeerar ku jira xaalad kasta oo ku saabsan dugsiga guriga. waalidka ayaa mas'uul ka ah garanaya xeerarka gobolka ee dugsiga iyo guriga oo lagu hubinaayo in xeerarka la raacay.